၁။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်
MOP မှ Software Plan တီထွင်ထုတ်လုပ်မှု (Development) လုပ်ငန်းနှင့် Website စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ Online ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုနှင့် School စီမံခန့်ခွဲခြင်းကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး ကျွန်တော်တို့၏ကုမ္ပဏီမှ လက်ခံထိန်းသိမ်းထားသော လူကြီးမင်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုတိကျမှန်ကန်စွာထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီ၏ အရေးကြီးဆုံးတာဝန်ဖြစ်သည်ဟု သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တိကျမှန်ကန်စွာကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှုလမ်းစဉ်ကို သတ်မှတ်ပြီး ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ မပေါက်ကြားရအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားပါမည်။
၂။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ရယူမှုနှင့်ပတ်သက်၍
MOP မှကိုယ်ရေးအချက်အလက် ရယူမှုကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် (၁) အသုံးပြုရန် ရည်ရွယ်မည့် လိုအပ်သောကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုသာ ကောက်ခံယူပါမည်။ (၂) ဥပဒေနှင့်ကိုက်ညီ၍ တရားမျှတသောနည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ စုဆောင်းပါမည်။
၃။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍
MOP မှစုဆောင်းရယူထားသော လူကြီးမင်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တိကျမှန်ကန်စွာထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ သတ်မှတ်ထားသော ရည်ရွယ်ချက်မှအပ အခြားသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို (အသုံးပြုခြင်း၊ ပေးပို့ခြင်းအစရှိသဖြင့်) မလုပ်ဆောင်ပါ။ MOP သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသောအသုံးပြုမှုကို မပြုလုပ်နိုင်အောင်လည်း စီမံဆောင်ရွက်ပါမည်။
၄။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ သင့်လျော်မှန်ကန်စွာ စီမံကွပ်ကဲမှု
MOP မှလူကြီးမင်းတို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ တိကျမှန်ကန်မှုနှင့် လုံခြုံမှုရှိစေရန်အတွက် လုံခြုံရေးစီမံချက်များကို လက်တွေ့လုပ်ဆောင်၍ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ မမှန်မကန်ချိတ်ဆက်ရယူမှု၊ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါက်ကြားမှု၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အစရှိသည့်တို့ မဖြစ်ပွားအောင် စနစ်တကျကြိုတင်ကာကွယ်ထားပါသည်။ ထို့အပြင် ဈေးကွက်၏လုံခြုံရေးနှင့် မတော်တဆမှုကို နမူနာယူ၍ လူကြီးမင်းတို့၏ တောင်းဆိုမှုအရ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ လိုအပ်လာချိန်တွင် ချက်ချင်းအမှား ပြင်ဆင်၍ ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်အောင်ကြိုးပမ်းပါမည်။
MOP မှကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်ဆက်နွယ်သော ဥပဒေအပြင် နိုင်ငံတော်မှချမှတ်ထားသောလမ်းစဉ်နှင့် အခြားသောအခြေခံစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ကိုလိုက်နာပါမည်။ ထိုအဆိုပါအခြေခံဥပဒေအတိုင်း MOP ၏ စီမံကွပ်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကို အမြဲတမ်းကိုက်ညီအောင်ဆောင်ရွက်ပါမည်။
၆။ အမြဲတမ်း Update ဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍
အသေးစိတ်စစ်ဆေးမှုနှင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းမှုကို Management System Review မှတစ်ဆင့် စီမံကွပ်ကဲမှုဖွဲ့စည်းပုံကို အခါအားလျော်စွာ ဖြည့်စွက်ပြုပြင်၍ အစဉ်အမြဲ အကောင်းဆုံးအခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းပါမည်။
၇။ တိုင်ကြားမှု၊ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုအပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း
MOP မှလက်ခံထိန်းသိမ်းထားသောလူကြီးမင်းများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် သက်ဆိုင်သောတိုင်ကြားမှု၊ ဆွေးနွေးမှုများကို တိကျမှန်ကန်သောစနစ်ကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်၍ ချက်ချင်း တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပါမည်။
ပြဋ္ဌာန်းသည့်ရက်စွဲ ၂၀၁၇ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ရက် MOP(Myanmar Oplans)Co., Ltd. Tatsuya Kobayashi
■ MOP(Myanmar Oplans)Co., Ltd. လိပ်စာ：နံပါတ် ၆၈/၁၃၊ ခိုင်ရွှေရည်အိမ်ယာ၊ အခန်းနံပါတ်၅၀၂၊ ဦးမောင်မောင်ခြံလမ်း၊ ၁၀ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းသူ：Tatsuya Kobayashi ဖုန်းနံပါတ်：　၀၉-၄၄၄၇၇၁၂၅၃
■ တရားဝင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ (MOP ၏ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာမဟုတ်ပါ) အထွေထွေ ဖောင်ဒေးရှင်း ဂျပန်ပြန်ကြားရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် လူမှုမြှင့်တင်ရေးအစည်းအရုံး (JIPDEC) ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် တိုင်ကြားမှု တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခန်း လိပ်စာ:　〒164-0011　Roppongi First Building, 9-9 Roppongi 1-chome, Minato-ku Tokyo, 106-0032 Japan ဖုန်းနံပါတ်:　03-5860-7565　0120-700-779
MOP မှထိန်းသိမ်းထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အသုံးပြုမည့် ရည်ရွယ်ချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဖန် MOP မှထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်ထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက် အသုံးပြုမည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်သည်။ (ရည်ရွယ်ချက်အားလုံးသည် ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ထိန်းသိမ်းမှု တွင်အကျုံးဝင်)
(၁) အလုပ်သမားပိုင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်
အလုပ်လျှောက်ထားသူထံမှ စုစည်းရယူထားသောသတင်းအချက်အလက်ကို အလုပ်ခန့်ရန်ရည်ရွယ်၍ အလုပ်သမားစီမံကွပ်ကဲမှု (အလုပ်သမားရေးရာ၊ အလုပ်တက်ရောက်/ပျက်ကွက်၊ လစာ၊ အလုပ်သမားစီမံခန့်ခွဲမှုအစရှိသဖြင့်) တွင်သာအသုံးပြုမည်။
(၂) နည်းပညာရှင်နှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်
ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းမှု
MOP(Myanmar Oplans)Co.,Ltd. တာဝန်ခံကိုယ်စားလှယ် Tatsuya Kobayashi
၁) အကျုံးဝင်သော ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် ထိုကိုယ်ရေးအချက်အလက် အသုံးပြုခြင်း ရည်ရွယ်ချက်
■ အလုပ်သမားပိုင်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် အလုပ်လျှောက်ထားသူထံမှ စုစည်းရယူထားသောသတင်းအချက်အလက်ကို အလုပ်ခန့်ရန်ရည်ရွယ်၍ အလုပ်သမားစီမံကွပ်ကဲမှု (အလုပ်သမားရေးရာ၊ အလုပ်တက်ရောက်/ပျက်ကွက်၊ လစာ၊ အလုပ်သမားစီမံခန့်ခွဲမှုအစရှိသဖြင့်) တွင်သာအသုံးပြုမည်။
■ နည်းပညာရှင်နှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာရှင်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အလုပ်ရှင်ထံ မိတ်ဆက်ရာတွင်သာ အသုံးပြုမည်။
၂) ထုတ်ဖော်ပြသမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထိန်းသိမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်ရန်နေရာ
MOP(Myanmar Oplans)Co.,Ltd. ကိုယ်ရေးအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုမန်နေဂျာ: Tatsuya Kobayashi ဖုန်းနံပါတ်：+၉၅၉-၄၄၄၇၇၁၂၅၃
၃) ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
အထက်ပါဖော်ပြထားသော နံပါတ်(၂)လိပ်စာသို့ဆက်သွယ်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းတစ်ခုခုဖြင့် လူကြီးမင်းတို့၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ဆောင်ရွက်မည်။
(၁) စာတိုက်မှတစ်ဆင့်လျှောက်ထားခြင်း [ ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တောင်းခံစာ ( ကိုယ်တိုင်ဖြည့်လျှောက်လွှာပုံစံ ) ] ကိုပေးပို့မည်ဖြစ်သောကြောင့် တောင်းခံစာကိုဖြည့်စွက်ရာတွင် ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်သောစာရွက်စာတမ်း၊ မိတ္တူများကို တွဲ၍ပေးပို့ပါ။ ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြု စစ်ဆေးပြီးနောက် ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက် လျှောက်ထားမှုကို တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကိုယ်စားဖြစ်မည်ဆိုပါက အပ်နှင်းစာ (သို့) ကိုယ်စားဖြစ်သူ၏ ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ မှတ်ပုံတင်ကဲ့သို့ သော ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု၍ရနိုင်သော စာရွက်စာတမ်း၊ မိတ္တူကိုတွဲပို့ ပေးပါ။ (ကိုယ်စားလှယ်များအနေဖြင့် တောင်းခံသူနှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက် (အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ) ကိုပါရေးသားဖော်ပြပေးပါ။
(၂) ရုံးသို့တိုက်ရိုက်လာရောက်၍ လျှောက်ထားခြင်း ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းကို တပါတည်းယူဆောင်လာပါက ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပါမည်။ စစ်ဆေးအတည်ပြုပြီးနောက် [ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တောင်းခံစာ (ကိုယ်တိုင်ဖြည့်လျှောက်လွှာပုံစံ)]တွင်ဖြည့်စွက်၍ ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက် လျှောက်ထားမှုကိုတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကိုယ်စားဖြစ်မည်ဆိုပါက အပ်နှင်းစာ (သို့) ကိုယ်စားဖြစ်သူ၏ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ မှတ်ပုံတင်ကဲ့သို့ သော ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြု၍ရနိုင်သော စာရွက်စာတမ်း၊ မိတ္တူကိုကိုယ်တိုင်ယူဆောင်လာပါ။
※စာတိုက်(သို့) ကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ စာရွက်စာတမ်းလုပ်ဆောင်ခြင်း ပြီးဆုံးသွားသည်နှင့် တပြိုင်နက် [ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တောင်းခံစာ(ကိုယ်တိုင်ဖြည့်လျှောက်လွှာပုံစံ)] ကိုMOP ကုမ္ပဏီမှ ဖျောက်ဖျက်ပစ်ပါမည်။
၅) ထပ်တိုးခြင်း၊ အမှားပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်ဆိုင်သော အသိပေးခြင်း
ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထပ်တိုးခြင်း၊ အမှားပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ထားသော အကြာင်းအရာများကို MOP မှ စာရွက်စာတမ်းဖြင့်ပြန်လည်အကြောင်းကြားပါမည်။
၆) ထုတ်ဖော်မပြသသော အကြောင်းအရင်း
အောက်ဖော်ပြပါအချက် (၁) မှ (၇) အတွင်းအကျုံးဝင်ပါက ထုတ်ဖော်ပြသရန်တောင်းဆိုမှုကိုငြင်းဆိုပါမည်။ ငြင်းဆိုရသည့်အကြောင်းအရာများကို စာရွက်စာတမ်းဖြင့်အကြောင်းကြားပါမည်။
(၁) [ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တောင်းခံစာ (ကိုယ်တိုင်ဖြည့်လျှောက်လွှာပုံစံ)] တွင်ဖော်ပြထားသော အမည်၊ လိပ်စာသည် ကာယကံရှင်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်သော လျှောက်လွှာတွင်ပါရှိသည့် အမည်၊ လိပ်စာနှင့် မကိုက်ညီသောအခါ
(၂) [ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တောင်းခံစာ (ကိုယ်တိုင်ဖြည့်လျှောက်လွှာပုံစံ)] တွင်ဖော်ပြထားသော ကိုယ်စားလှယ်အမည်၊ လိပ်စာသည် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားသော အမည်၊ လိပ်စာနှင့် မကိုက်ညီသောအခါ
(၃) ပေးပို့ပြသရန်တောင်းဆိုထားသော သတင်းအချက်အလက်သည် ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွင် မပါဝင်သောအခါ
(၄) [ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် တောင်းခံစာ (ကိုယ်တိုင်ဖြည့်လျှောက်လွှာပုံစံ)] တွင်ဖော်ပြထားသော ကိုယ်စားလှယ်အမည်၊ လိပ်စာသည် ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်သော စာရွက်စာတမ်းမှာ ဖော်ပြထားသော အမည်၊ လိပ်စာနှင့် မကိုက်ညီသောအခါ
(၅) ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထုတ်ဖော်ပြသမှုကြောင့် ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနှင့် မတရားသောလုပ်ရပ်ကို အားပေးအားမြှောက်ခြင်း၊ ရှေ့ ဆောင်လမ်းပြ ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုယူဆမိသောအခါ
(၆) ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထုတ်ဖော်ပြသမှုကြောင့် နိုင်ငံတော်၏လုံခြုံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှာ ယုံကြည်မှု ပျက်ပြားစေ၍ သံတမန်ရေးရာတွင် အကျိုးဆုတ်ယုတ်စေသည်ဟု ယူဆမိသောအခါ
(၇) ဖော်ပြမှုဆိုင်ရာ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ထုတ်ဖော်ပြသမှုကြောင့် ဒုစရိုက်မှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ နှိမ်နင်းရေးနှင့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အပြင်အခြားသောအများပြည်သူလူထု၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးတွင် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟု ယူဆမိသောအခါ
၇) အခကြေးငွေ ကောက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။